Igwe na-egwupụta olulu mmiri
Igwe na-egwupụta ihe na kwụ ọtọ
Rotary mkpọpu ihe
Obere rotary olulu mmiri
Obere ụgbọ ala crawler na-ebufe ala niile
Dezie Xugong Jin ụgbọala n'ime
Oge nzipu: Nov-03-2021
Xugong Jin na-abanye n'ime "mpaghara a machibidoro iwu nke ndụ" elu ụlọ nke ụwa dị elu nke mita 4,000 Ịtọkwa ọkpọkọ mmanụ Guerra dragọn mmanụ ojii dị ogologo 1,080 km kwekọrọ na okporo ụzọ Qinghai-Tibet nke mmanụ a si Golmud na Qinghai ruo Lhasa. Na Tibet a maara dị ka R ...GỤKWUO »
Rụpụta olulu ntọala kachasị omimi
Iji mezuo usoro ihe owuwu ahụ, ndị otu ọrụ ahụ webatara XCMG XR400E, XR360E, XR280E na XR280D rotary Drilling rigs, bụ ndị nwere nkà na ụzụ na ahụmahụ na-ewu na China, na-ahụ maka ikpo ntọala ntọala nke isi ọrụ a. N'ihi th...GỤKWUO »
XCMG XZ3600 kehoraizin ntụziaka mkpọpu rig bụ n'ezie mfe iji!
Oge nzipu: Sep-11-2021
Na Hubei Chibi, oru ngo a na-arụ pipeline gas nwere mgbagwoju anya geology. XCMG XZ3600 kehoraizin directional drilling rig siri ike ma na-adịgide adịgide, na-eji ngafe n'okpuru ala egwu egwu. Na XCMG kehoraizin directional drilling rig's "traversal" ike, ndị ahịa nwere ...GỤKWUO »
Ike nke nkwekọrịta, XCMG rotary Drilling Machine Group guzo na ndịda!
Ihe oru ngo a bara ezigbo uru maka ndu mmadu. Ọnụ ọgụgụ nke ntọala ntọala bụ 3,600, na dayameta nke ikpo bụ 600mm, 800mm, na 900mm. Nkezi omimi ikpo ihe dị 25m, na olu ihe owuwu ahụ buru ibu. Agbanyeghị, ụdị ala karst dị na mpaghara na-enwekarị ihe mberede dịka ndakpọ...GỤKWUO »
XCMG na-akwalite “mgbasawanye” nke ike geothermal na mbọ “carbon abụọ”!
Kemgbe mmalite nke afọ a, ekwurula “3060″ ebumnuche ugboro ugboro, na ebulila ebumnuche “carbon abụọ” ka ọ bụrụ atụmatụ mba. Mpaghara niile na-agba mbọ ka ha bụrụ ndị nchekwa nke mgbanwe ume ma mee ka mmezi nke nhazi ike dị ngwa ngwa ...GỤKWUO »
XZ6600 HDD Beijing-Hangzhou Grand Canal na-agafe
Oge nzipu: Jul-15-2021
XCMG kehoraizin directional akuakuzinwo XZ6600 agafe na Beijing-Hangzhou Canal oru ngo bụ inyere mwekota nke mmiri na Pizhou City. Site na ngafe nke XCMG horizontal directional drilling rig, a na-ejikọta akụkụ ugwu na ndịda nke ọwa mmiri iji hụ na nchekwa nke mmiri supp ...GỤKWUO »
XCMG Water Drilling Rig
Ngwuputa ike na-enyere aka nnọpụiche carbon N'afọ ndị na-adịbeghị anya, na nzaghachi maka iwu mmepe ume ike dị ọcha nke mba na ịkwalite mmepe na itinye n'ọrụ nke ike geothermal nke mba m, XCMG Foundation ewepụtala ọganihu n'ime ubi nke ịkụ ala na mmepụta ike. XCMG na...GỤKWUO »
Ọrụ pipeline gas nke East China Russia na-amalite site na ókèala Sino Russia na Heihe City, Heilongjiang Province.
Oge nzipu: Jun-01-2021
Ọrụ Sino-Russian East Route Natural Gas Pipeline na-amalite na ókèala Sino-Russian na Heihe City, Heilongjiang Province wee kwụsị na Shanghai. Ogologo ya dị kilomita 5,111. E kewara ya na ngalaba atọ maka nkwado na iwu n'usoro. N'ime ha, akụkụ ugwu na t ...GỤKWUO »
XSL20/1000 gbapụrụ 1680 mita mmiri mmiri ọkụ iji nyere ụlọ ọrụ Yifang aka.
Oge nzipu: Mee-19-2021
Anụrụ m na onye sitere na Mahadum Taiwan nyere anyị mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ…” N'oge na-adịbeghị anya, XCMG water well-drigs rigs gwuru n'okpuru ala mmiri mmiri ọkụ na Xinquan Township, Jiangxi. Kpamkpam! A na-enye mmiri mmiri na-ekpo ọkụ dị ka "aristocrat na mmiri" n'ihi ya ...GỤKWUO »
Anyị na-anọ ma chebe “mile ikpeazụ” a!
Oge nzipu: Mee-10-2021
Na Indonesia, obodo a maara dị ka "mba nke agwaetiti iri puku", XCMG rotary Drilling Rigs, kwụ ọtọ na-egwupụta ihe na ngwaahịa ndị ọzọ nwere oke ahịa ahịa n'ahịa obodo, ma ha na-agbasasị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10 agwaetiti. Ebe a na-ewu ihe n'èzí bụ m...GỤKWUO »
1,000th XCMG horizontal directional rig gbapụrụ n'ahịrị mgbakọ ahụ na 2019 na emume mwepụta nke nnukwu tonnage kehoraizin ntụzịaka.
Oge nzipu: Eprel-10-2021
Ememe mwepụta nke 1,000th XCMG horizontal directional drilling rig na 2019 na mwepu nke nnukwu-tonnage kehoraizin directional rigs e mere nke ukwuu na XCMG Foundation! N'ọhịa nke ígwè trenchless, ọ hapụla strok siri ike ma mara mma! Afọ iri nke ịrụsi ọrụ ike...GỤKWUO »
XCMG, kpughee ọkwa ọkwa ọzọ!
N'oge na-adịbeghị anya, "akwụkwọ ndị dike" nke na-agafe gburugburu ahụ aghọwo ndị a ma ama, Otú ọ dị, n'ihi ogologo ya na ihe isi ike ya, ọtụtụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ Trenchless magburu onwe ha na-anọpụ jiri ike mee ihe dị ka "nkume nrịgo" "Nkume nrịgo" nke ọrụ mega a bụ . ..GỤKWUO »
Adreesị: Xuzhou Dinghua Construction Machinery Co., Ltd.
Caisson Rig, Igwe na-egwu mmiri Obere, igwe olulu mmiri, igwe na-egwuputa ihe,